တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့ Gen Y Gen Z လေးတွေရဲ့ သတ္တိရှိမှုကိုချီးကျူး အားပေးစကားလေးပြော လာတဲ့ဖွေးဖွေး – Cele Snap
Gen Y Gen Z လေးတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာအဓိကကျတဲ့ သူရဲကောင်းလေးတွေဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ရဲရဲရင့်ရင့်ရှိပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်း စည်းလုံးမှုရှိကာ တီထွင်ကြံဆမှုတွေကောင်းလွန်းတာကြောင့် ပြည်သူအားလုံးကလေးစားချီးကျူးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ရှေ့တန်းကနေ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်သလို ဖြိုခွင်းခံရမှုတွေကိုလည်း အကာအကွယ်အပြည့်အစုံနဲ့ တိုက်ခိုက်ကာကွယ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းဖွေးဖွေးက တော်လှန်ရေးမှာသူကိုယ်တိုင်လည်း တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်ခဲ့သလို အားကြိုးမာန်တတ် သတ္တိရှိရှိပါဝင်နေကြတဲ့ သူရဲကောင်းလေးတွေကိုလေးစားမိကြောင်း ခုလိုရေးသားဖော်ပြရင်းအားပေးစကားလေးပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
”GEN Z ​ညီမ​လေး ​မောင်​လေးတို့ ရဲရဲ​တောက်သတ္တိ​တွေရှိတာ ကမ္ဘာက​ရော ​မဖွေးတို့ Gen Y ​တွေ ​ရော Gen X ​တွေအားလုံး​ကော မျက်ဝါးထင်ထင် ​တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ … အားလုံးရဲ့ ​ပေးဆပ်မှု​တွေ​​ကြောင့် နိုင်​တော့မှာအ​သေအချာပါ!!! စစ်အာဏာရှင် ဘက်ကဖြိုခွင်းပါတယ် အ​ကြောင်းပြပြီး ​သေ​စေတဲ့လက်နက်​တွေသုံး ပြည်သူ​တွေကိုအကြမ်းဖက် ​နေတာ​တောင် ဘာလက်နက်မှမပါပဲ ရင်​ကော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြ, အချင်းချင်းကာကွယ်ကူညီ ခဲ့ကြတာ ​တွေ့ရ​တော့ ရင်ထဲနင့်​နေ​အောင်​လေးစားရပါတယ်… But…တိုင်းပြည် အတွက် ဒီ​လောက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ် နဲ့ ဒီလိုသတ္တိခဲ ​လေး​တွေ.. Gen X, Y, Z ဘယ် သူ့ကို မှ ထပ်မဆုံးရှုံးပါရ​စေနဲ့​တော့… နောက်​နေ့ ဆန္ဒပြပါ။ ​ပြေးစရာရှိ အပီ​ပြန်ပြေး။
ကမ္ဘာကိုသိ​နေပြီးသား​ပေမယ့် ထပ်သိ​အောင်သာ Social Media က ထပ် ပြဖို့ Footage ရရင်ရပါပြီ! တ​နေကုန် အပြင်မှာ မ​နေပါနဲ့ ..! သုသု ​ပြော သလို သူတို့ကိုပဲ ​နေလှန်းထားလိုက်ပါ နှလုံးသား​ကော ရှက်​ကြော​ရော, ဆင်ခြင်တုံတရားပါ ​မွေးထဲက ပါမလာတဲ့ အဲ့ စစ်ကျွန်​တွေနဲ့ တတ်နိုင်ရင်ထိပ်တိုက် အနီးကပ် မ​တွေ့ကြပါနဲ့​​တော့.. . မတန်လို့! တန်ဖိုးရှိတဲ့ ​ဖွေးတို့ပြည်သူ တ​ယောက်မှ ထပ်အပါမခံနိုင်​​တော့လို့… နိုင်ကို နိုင်​တော့မှာ မို့ အ​ရေး​တော်ပုံ​အောင်​တော့မှာမို့ ပိုပါးနပ်​ပေးကြပါ… ပါးပါးနပ်နပ် သတ္တိရှိရှိ ဆက်ရင်ဆိုင်မယ်! ဒါ​တွေအားလုံးပြီးတော့မှ ဟိုဘက်ကို တူတူ အားရပါးရ ဟားချင်​သေးလို့”ဆိုတဲ့စာလေးပဲဖြစ်ရာ GenY GenZ လေးတွေအားရှိအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေ။
Gen Y Gen Z လေးတှကေတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နှဦေးတျောလှနျရေးတိုကျပှဲကွီးမှာအဓိကကတြဲ့ သူရဲကောငျးလေးတှဆေိုလညျးမမှားပါဘူး။ ရဲရဲရငျ့ရငျ့ရှိပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျလညျး စညျးလုံးမှုရှိကာ တီထှငျကွံဆမှုတှကေောငျးလှနျးတာကွောငျ့ ပွညျသူအားလုံးကလေးစားခြီးကြူးနကွေတာလညျးဖွဈပါတယျ။သူတို့ကိုယျတိုငျလညျး ရှတေ့နျးကနေ လှုပျရှားမှုတှပွေုလုပျသလို ဖွိုခှငျးခံရမှုတှကေိုလညျး အကာအကှယျအပွညျ့အစုံနဲ့ တိုကျခိုကျကာကှယျပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။အခုလညျးဖှေးဖှေးက တျောလှနျရေးမှာသူကိုယျတိုငျလညျး တတျနိုငျသလောကျပါဝငျခဲ့သလို အားကွိုးမာနျတတျ သတ်တိရှိရှိပါဝငျနကွေတဲ့ သူရဲကောငျးလေးတှကေိုလေးစားမိကွောငျး ခုလိုရေးသားဖျောပွရငျးအားပေးစကားလေးပွောကွားထားတာဖွဈပါတယျ။
”GEN Z ​ညီမ​လေး ​မောငျ​လေးတို့ ရဲရဲ​တောကျသတ်တိ​တှရှေိတာ ကမ်ဘာက​ရော ​မဖှေးတို့ Gen Y ​တှေ ​ရော Gen X ​တှအေားလုံး​ကော မကျြဝါးထငျထငျ ​တှခေဲ့ရပွီးပါပွီ … အားလုံးရဲ့ ​ပေးဆပျမှု​တှေ​​ကွောငျ့ နိုငျ​တော့မှာအ​သအေခြာပါ!!! စဈအာဏာရှငျ ဘကျကဖွိုခှငျးပါတယျ အ​ကွောငျးပွပွီး ​သေ​စတေဲ့လကျနကျ​တှသေုံး ပွညျသူ​တှကေိုအကွမျးဖကျ ​နတော​တောငျ ဘာလကျနကျမှမပါပဲ ရငျ​ကော့ဆန်ဒပွခဲ့ကွ, အခငျြးခငျြးကာကှယျကူညီ ခဲ့ကွတာ ​တှရေ့​တော့ ရငျထဲနငျ့​နေ​အောငျ​လေးစားရပါတယျ… But…တိုငျးပွညျ အတှကျ ဒီ​လောကျတနျဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ စိတျဓါတျ နဲ့ ဒီလိုသတ်တိခဲ ​လေး​တှေ.. Gen X, Y, Z ဘယျ သူ့ကို မှ ထပျမဆုံးရှုံးပါရ​စနေဲ့​တော့… နောကျ​နေ့ ဆန်ဒပွပါ။ ​ပွေးစရာရှိ အပီ​ပွနျပွေး။
ကမ်ဘာကိုသိ​နပွေီးသား​ပမေယျ့ ထပျသိ​အောငျသာ Social Media က ထပျ ပွဖို့ Footage ရရငျရပါပွီ! တ​နကေုနျ အပွငျမှာ မ​နပေါနဲ့ ..! သုသု ​ပွော သလို သူတို့ကိုပဲ ​နလှေနျးထားလိုကျပါ နှလုံးသား​ကော ရှကျ​ကွော​ရော, ဆငျခွငျတုံတရားပါ ​မှေးထဲက ပါမလာတဲ့ အဲ့ စဈကြှနျ​တှနေဲ့ တတျနိုငျရငျထိပျတိုကျ အနီးကပျ မ​တှကွေ့ပါနဲ့​​တော့.. . မတနျလို့! တနျဖိုးရှိတဲ့ ​ဖှေးတို့ပွညျသူ တ​ယောကျမှ ထပျအပါမခံနိုငျ​​တော့လို့… နိုငျကို နိုငျ​တော့မှာ မို့ အ​ရေး​တျောပုံ​အောငျ​တော့မှာမို့ ပိုပါးနပျ​ပေးကွပါ… ပါးပါးနပျနပျ သတ်တိရှိရှိ ဆကျရငျဆိုငျမယျ! ဒါ​တှအေားလုံးပွီးတော့မှ ဟိုဘကျကို တူတူ အားရပါးရ ဟားခငျြ​သေးလို့”ဆိုတဲ့စာလေးပဲဖွဈရာ GenY GenZ လေးတှအေားရှိအောငျမြှဝပေေးလိုကျပါရစေ။